ANTENIMIERA : Voafidy ireo solotena handrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana
Rojoniaina Ranaivoson Andriamaholy sy Anthonia Rakotoniaina no voafidy hisolo tena ny Antenimieran-doholona hiasa etsy Ambohidahy, ary Rasolonandrasana George sy Noelson William kosa no voafidy hisolotena ny Antenimieram-pirenena. 25 mars 2021
Izy ireo izay hamita ny fe-potoam-piasana mandritra ny fito taona. Tanteraka omaly ny fifidianana ireo solontena miisa roa avy amin’ny Antenimieran-doholona. Izy ireo no anisany handrafitra ireo mpikambana miisa sivy ao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana na ny HCC . Miisa 17 ireo antontan-taratasy filatsahan-kofidiana voaray ho an’ireo kandida mpifaninana hisolotena an’ity andrim-panjakana ity.
Ny talata hariva lasa teo no nikatona tamin’ny fomba ôfisialy ny fandraisana ny dosie ary nirosoana avy hatrany, omaly maraina, ny fifidianana. Voafidin’ny maro an’isa tamin’izany i Rojoniaina Ranaivoson Andriamaholy sy Anthonia Rakotoniaina. Izy ireo izay samy nahazo vato miisa 16 avy tamin’ireo Loholona nandatsa-bato raha toa ka Rasolonandrasana George sy Noelson William kosa no voafidy hisolotena ny Antenimieram-pirenena. Vonona ny hanatanteraka ny adidy goavana nankinina aminy izy ireo ary hitandro mandrakariva ny fanajana ny tany tan-dalàna amin’ny alalan’ny fanajana toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana.
Nambaran’izy ireo fa ny hisian’ny fitoniana hitondrana ny asa fampandrosoana no tena zava-dehibe sy hapetraka ho laharam-pahamehana. “Ny tanjona dia ny Fanjakana tena hitondra ny fampandrosoana. Tsy miaro ny Antenimieran-doholona fa miaro ny Fanjakana tan-dalàna sy miaro ireo zavatra rehetra izay mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana. Araka ny maha Mpitsara anay dia tahaka izany foana ny fomba fiasa hatramin’izay dia ny mitsara araka ny lalàna”, hoy ny nambaran’i Rojoniaina Ranaivoson Andriamaholy.
Araka izany, dia izy roa vavy ireto no nahazo ny toerana ho etsy Ambohidahy avy amin’ny Antenimieran-doholona. Hita porofo izao, hoy ny filohan’ity andrim-panjakana ity fa manome toerana feno ho an’ny vehivavy ny Loholona eo amin’ny fandraisan’ andraikitra ho an’ny Firenena. “Voaporofo izao fa manaja ny toeran’ny vehivavy ny eto amin’ny Antenimieran-doholona”, hoy izy. Nandritra ny fivoriana izay azon’ny besinimaro natrehina, omaly, no nanatanterahana ny fifidianana. Hitohy amin’ny asam-baomiera izay handinihana volavolan-dalàna laharana faha- 003/21 tamin’ny 24 febroary 2021 indray ny fivorian’ireo Loholona anio.